Global Voices teny Malagasy » Firenena tsy ankatoavina ve i Taiwan? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Janoary 2020 8:51 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Noubel Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Taiwan (ROC), Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Kianjan'ny Fahafahana ao Taipei nametrahana ilay fiara mifono vy nabontsina ho fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-30  ny fandripahana tao Tiananmen naranty tamin'ny Mey 2019. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Ny voalohany dia ny Kuomintang  (KMT, 中國國民黨 amin'ny teny shinoa, na ara-bakinteny dia Antoko Nasionaly Shinoa), antoko iray izay niorina tamin'ny taona 1911, raha nirodana ny fitohizan-tarana-panjakana shinoa Qing farany ary lasa repoblika  i Shina. Mifototra amin'ny fotokevitra telon'ny vahoaka  ny ideolojiany, ka raha tononina dia ny nasionalisma, demaokrasia ary ny fiainan'ny vahoaka. Zavadehibe ny manamarika fa maka ireo fotokevitra ireo ihany koa ny Antoko Komonista Shinoa (CCP) tany am-piandohan'ny tantara ary ireo antoko anankiroa ireo dia samy notohanan'i Firaisana Sovietika  tamin'izany fotoana izany.
Ny antoko faharoa indray dia ny Antoko Komonista Shinoa  (CCP, 中国共产党 amin'ny teny shinoa), niorina tamin'ny taona 1921. Mametraka ny fototra ideolojiany amin'ny Komonisma, tamin'ny voalohany nandray ny maodely Sovietika, fa taty aoriana nandrafitra ny azy manokana. Hatramin'ny taona 1927, ny CCP amin'ny ankapobeny dia niaradia sady nanohana  ny KMT.
Taorian'io daty io ny antoko roa nisaraka antaonany vitsy noho ny fahasamihafana ara-potokevitra, saingy nanapa-kevitra ny hitambatra indray tamin'ny taona 1931 tao anatin'ny fampitambarana ny ezaka hiadiana amin'ny fananiham-bohitra Japoney an'i Shina . Naharitra hatramin'ny fiandohan'ny taompolo 1940 izany vanim-potoana fantatra amin'ny hoe Manda Tafaray Faharoa , fa samy nanana ny faniriandaza ny roa tonta ka niafara tamin'ny fivakisana izany.
Nanomboka tamin'ny taona 1946, samy niditra tamin'ny ady an-trano tanteraka  ny roa tonta izany nifarana tamin'ny taona 1949 raha nahazo ny fifehezana an'i Shina Tanibe ny CCP, ary nanapa-kevitra ny handositra ho any amin'ny nosy Taiwan ny KMT, niaraka tamin'ny miaramila sy mpialokaloka miisa roa tapitrisa. Nanomboka tamin'ny taona 1949 ny roa tonta samy nilaza ho solotena ara-dalàna tokana an'i Shina.
Koa satria niditra tao amin'ny Ady Mangatsiaka  izao tontolo izao, nampizarazara ny kaontinanta sy ny firenena ho governemanta tohanan'i Moskoa na Washington sy ny Tandrefana, lasa nanana anjara toerana lehibe i Taiwan. Nametraka ny nosy ho toby miaramila sy politika stratejika ho amin'ny tombontsoan'i Etazonia ao Azia ny adin'i Korea , narahan'ny adin'i Vietnam . Avy amin'izany no nanomezan'i Washington fanampiana ara-toekarena sy nilazany ny fanohanana ara-politika sy ara-miaramila an'i Repoblikan'i Shina ao Taiwan, ka tsy nankatoavana ara-diplaomatika ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina. Tena zavadehibe ho an'ny KMT ireny taona ireny ahafahana mifehy tanteraka ny fiarahamonina Taiwaney, ary nananganana tsikelikely ny toekarena maoderina tao amin'ny nosy.
Fa tsy afaka ny tsy hiraharaha hatrany ny fisandratan'i China, na ara-politika na ara-toekarena, ny tontolo Tandrefana. Avy amin'izany, nanomboka tamin'ny taompolo 1960s , maro tamin'ny firenena Tandrefana no nanapa-kevitra ny hamarana ny fifandraisana ara-diplaomatika an'i Taipei ka nifindra ho any Beijing, noho ny fitazonan'i Shina ny politikan'ny ‘Shina Tokana’  ho fepetra tsy maintsy ankatoavina raha hifandray ara-diplaomatika. Nametraka fifandraisana diplaomatika tamin'i PRC i Etazonia tamin'ny 1 Janoary 1979 .
Eo amin'ny fampiharana anefa, manodidina ny 50 ny firenena  mihazona birao fisoloantena ao Taiwan izay misahana ny asa mahazatra ampanaovina ny ambasady na ny kaonsilà. Hatramin'ny faran'ny taona 2019, firenena miisa 15 ihany sisa no mihazona fifandraisana diplaomatika amin'i Taiwan.
Indraindray ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena mampiasa ny voambolana ‘Shina Taipei ’ hamaritana an'i Taiwan. Amin'ny ankapobeny ampiasaina io marika io mandritra ny lalao olaimpika, fa mampiasa azy ihany koa ny fikambanan-drafitra lehibe tahaka ny Holafitra Manerantany momba ny Varotra (OMC).
Ao Taiwan, misy ny hetsika  iray miantso ny handaozana ny voambolana sy fanondroana ny ‘Repoblikan'i Shina’ mba hanoloana azy amin'ny voambolana Taiwan, na Repoblikan'i Taiwan. Antoko politika roa no tena mitabataba amin'ity lohahevitra ity: ny Formosa Alliance  sy ny Taiwan Solidarity Union . Ity hetsika ity dia manana ny fiandohany tao amin'ny fanapaham-panjanahantany Japoney an'i Taiwan  tamin'ny taona 1895-1945 ary nivoatra avy eo ho lasa antoko politika maro, hetsika sivika maro nanomboka tamin'ny taompolo 1990s ary mitaky hanana zo ara-kolontsaina sy fitenenana.
Somary manjavozavo kokoa  indray ny DPP amin'izany, amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Maitso Miara-Dia azy, manohana ny fanondroana an'i Taiwan ho fanjakana manana ny fiandrianam-pireneny ary tsy mitady ny hitambarana indray amin'i PRC. Fa samy manana ny fomba fitenenany azy  araka ny tetiandrom-pifidianana sy ny fijeriny manokana ireo mpitarika ambony ao amin'ny DPP ny lohahevitra hoe Taiwan no anondroana an'i ROC izay voafetra amin'ny zaratanin'i Taiwan, na mety hivoatra mankany amin'ny fanambarana ny Repoblikan'i Taiwan izany.
Ho an'i Beijing, tsy azo ekena  izay filaza rehetra amin'ny Taiwan mahaleotena. Mbola manohy mametraka i Beijing fa politika ofisialiny eo ambany fitarihan'ny CCP ny fampitambarana indray ary tetipanorony amin'ny hoavy, fa tsy ampiharina ny hery ara-miaramila. Mino izy fa lasitra ho amin'ny fitambarana indray ny firenena iray, rafitra roa’  ampiharina amin'i Hong-Kong sy i Macao amin'izao fotoana izao.
Mandritra izany fotoana izany, amafisin'i Beijing ny politikany amin'ny fanaovana izay hanirery an'i Taiwan eo amin'ny diplaomasia sy ny sehatra hafa. Nahomby izy tamin'ny fandresendahatra ireo firenena maro nankatoa an'i Taiwan hanapaka ny fifandraisana aminy ary hivadika hankany Shina. Andanin'izany, nahomby izy tamin'ny fametrahana ny fijeriny amin'ireo hetsika ara-toekarena maro, manery ny zotram-piaramanidina vahiny, mpivarotra antserasera ary mpiantsehatra ara-kolontsaina sy akademika hampiasa ny voambolana ‘Taiwan, China’ rehefa manao dokan-draharaha  (servisy) na manambara lanonana mba hialana amin'ny mety ho valifaty, sazy, na fitsipahana amin'ny fidirana amin'ny tsena shinoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/01/10/146509/
 tsingerintaona faha-30: https://globalvoices.org/2019/06/05/tiananmen-commemorations-an-inconvenient-truth-for-beijing-a-dire-warning-for-hong-kong-and-taiwan/
 fotokevitra telon'ny vahoaka: https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Principles_of_the_People
 notohanan'i Firaisana Sovietika: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuomintang#Soviet-style_military
 Antoko Komonista Shinoa: https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China
 niaradia sady nanohana: https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China#Founding_and_early_history_(1921%E2%80%931927)
 fananiham-bohitra Japoney an'i Shina: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_invasion_of_Manchuria
 Manda Tafaray Faharoa: https://en.wikipedia.org/wiki/Second_United_Front
 ady an-trano tanteraka: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuomintang#Under_Chiang_Kai-shek_in_Mainland_China
 Ady Mangatsiaka: https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War
 adin'i Korea: https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
 adin'i Vietnam: https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War
 nanomboka tamin'ny taompolo 1960s: https://en.wikipedia.org/wiki/Dates_of_establishment_of_diplomatic_relations_with_the_People%27s_Republic_of_China
 ‘Shina Tokana’: https://en.wikipedia.org/wiki/One-China_policy
 1 Janoary 1979: http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_taiwan.htm
 manodidina ny 50 ny firenena: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_in_Taiwan
 ‘Shina Taipei: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Taipei
 Formosa Alliance: https://en.wikipedia.org/wiki/Formosa_Alliance
 Taiwan Solidarity Union: https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_Solidarity_Union
 fanapaham-panjanahantany Japoney an'i Taiwan: https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_under_Japanese_rule
 Somary manjavozavo kokoa: https://newbloommag.net/2016/03/26/dpp-roc-independence/
 samy manana ny fomba fitenenany azy: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/thousands-call-for-taiwan-independence-vote-in-protest
 tsy azo ekena: https://www.reuters.com/article/us-china-taiwan/china-says-taiwan-not-a-country-taiwan-says-china-needs-reality-check-idUSKCN1C20YF
 firenena iray, rafitra roa’: https://en.wikipedia.org/wiki/One_country,_two_systems
 rehefa manao dokan-draharaha: https://theconversation.com/taiwan-how-airlines-are-being-dragged-into-chinas-bitter-dispute-over-the-islands-sovereignty-100932